मैत्री शिक्षामा जोड - Pradesh Today मैत्री शिक्षामा जोड - Pradesh Today
मैत्री शिक्षामा जोड
बैशाख १२, २०७६ उमा भण्डारी
अहिले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । शिक्षण संस्थाहरुले शैक्षिक सत्रलाई विशेष रुपमा लिने गर्दछन् । आफ्नो शैक्षिक संस्थालाई अब्वल बनाउने र गुणस्तरीय शिक्षा दिने प्रतिवद्धता सार्वजनिक भइरहेका छन् । पछिल्लो समय युवा पुस्ताको हातमा शिक्षण संस्थाका नेतृत्व आइरहेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र र विद्यालयको सुधारको योजनाको बारेमा दाङभ्याली इङ्लिस विद्यालय तुलसीपुर–६, दाङका संस्थापक प्रिन्सिपल तिलक शाहू सँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
हामी नयाँ शैक्षिक सत्रमा अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थीलगायतका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध विस्तार गर्दै बालबालिकाहरुको शैक्षिक अवस्थालाई मात्र नभई उनीहरुको सर्वाङ्गीण विकासलाई समेत मध्यनजर गरेका छौँ ।
उनीहरुको हरेक क्षमतालाई उन्नत बनाउन आवश्यक पर्ने गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै आएका छौँ । यसलाई निरन्तरता दिदै थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अघि बढ्ने नै हो ।
विद्यार्थीमा संस्कार, आदर र सम्मान हरायो भन्छन् ? के पाउनु भएको छ ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । संस्कार हराएको भन्दा पनि परिवर्तन भएको हो । Nothing is permanent except change। जहाँसम्म आदर सम्मानको प्रश्न छ । कहिलेकाहिँ आपसी सद्भावको कमी भएको हो कि भन्ने कसैलाई पनि लाग्छ ।
तैपनिMutual relation / faith को कुरा पनि हो । यद्यपि संस्कार र सद्भावको संरक्षणको संरक्षण, संवद्र्धन र परिपालना गर्न यसको सम्बोधन गर्नु हाम्रो दायित्व पनि हो ।
यसको संरक्षणका लागि के कस्ता गतिविधिहरु विद्यालयमा सञ्चालन गरिरहनुभएको छ ?
विद्यालयभित्र Harmuious environment devlop गर्ने भाइ–बहिनीहरुलाई संस्कारगत विषयवस्तुहरुमा अभ्यास गराईरहने गरेका छौँ । विभिन्न किसिमका अन्तरक्रियाहरुमा समेत हामीले भाइ–बहिनीहरुको सहभागितालाई अनिवार्य गराएका छौँ ।
यसमा निरन्तर जोड दिन्छौँ पनि । हामी आफै पनि समाजमा उदाहरणीय रुपमा प्रस्तुत हुने प्रयास गरिरहेका छौँ । राज्यको नीति नियम र परिधिभित्र रही विभिन्न किसिमका सामाजिक गतिविधिहरु जस्तैः असाहाय, बृद्धबृद्धाहरुलाई सहयोग हस्तान्तरण अथवा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरजस्ता अतिरिक्त कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी समाजप्रति पनि दायित्व र जिम्मेवारीवोध गराउन प्रयास गरेका छौँ ।
अर्कोतर्फ वार्षिक, मासिक तथा साप्ताहिक कार्ययोजना अनुसारका अतिरिक्त क्रियाकलापहरु सञ्चालनमार्फत भाषा, संस्कृति, भेषभूषाको संरक्षण गर्ने प्रयासमा लागिरहेका छौँ ।
निजी विद्यालयहरुमा विकृति देखिएको छ भन्छन् नि के हो ?
यो यस्तो हो । Where is light,there is shadow भने झैँ पटक्कै कमी कमजोरी नभएको क्षेत्र साहय कुनै पनि नहोला यो दुनियामा । तर पनि शिक्षण संस्थाजस्तो पवित्र स्थानमा त्रुटी र विकृति सकेसम्म शुन्य नै हुनुपर्दछ ।
फेरी पनि Transparent नहुने हो भने अभिभावकहरुको विश्वास घट्ने भएकाले पनि निजी विद्यालय सञ्चालक आफैमा सचेत हुन जरुरी छ । यसमा हामी सचेत छौँ ।
कसरी विश्वास दिलाउन सक्नु हुन्छ कि, हामी बालमैत्री वातावरणमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेका छौं भनेर ?
हामीले बुझेको बालमैत्रीका अभिन्न अंगहरु भनेका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक एवं व्यवहारगत पक्षहरु नै मुख्य हुन् । तसर्थ अनुभवी र तालिम प्राप्त शिक्षकद्वारा बालमनोविज्ञानलाई बुझेर अध्यापन गर्ते र गराउने प्रयत्न गरेका छौँ ।
अर्कोतर्फ स्वस्थ पिउने पानीको व्यवस्था, स्वस्थ तथा ताजा खाजाको व्यवस्था, सुविधा सम्पन्न कक्षाकोठाको व्यवस्था सुरक्षित खेलमैदान तथा सिसिटीभी क्यामेराबाट सुपरभिजन गर्दै आधुनिक प्रविधिमा जोड दिदै आएका छौँ ।
यदि कुनै बालबालिका वास्तवमै आर्थिक समस्याका कारण अध्ययन गर्न नसक्ने छन् भनी कुनै संघसंस्था तथा स्थानीय तहबाट सिफारिस लिएर आएकाहरुलाई निःशुल्क शिक्षण गराउँदै आएका छौँ ।
पछिल्लो समय बालबालिकाहरुका सीप र कलाको कदर गर्दै नचाउँदै, खेलाउँदै फकाउँदै सिकाउने अभिप्रायले सोही अनुसार शैक्षिक सामाग्रीको प्रयोगमा जोड दिँदै आएका छौँ ।
युवाहरुलाई शैक्षिक नेत्तृवको जिम्मा आएको छ, यसको कसरी व्यवस्थापन हुँदै आएको छ ?
हो, समयको माग पनि त्यही हो । अर्थात् युवा नेतृत्व । तर युवालाई शैक्षिक नेतृत्वको जिम्मेवारी दिईरहदा सामान्यतया 3G लाई सँगसँगै जोड्न अनिवार्य छ । मूलतः सही व्यवस्थापनका लागि Experienced generateion matured generation / Young भयो भने एउटा विद्यालय व्यवस्थापनपूर्ण हुन्छ ।
जसले बालबालिकालाई सही दिशामा लैजानका लागि मार्ग निर्देशन गर्न पनि सहज बनाउँछ । यसका साथै ध्यmभल झउयधभचmभलत मा पनि ध्यान दिनु आजको आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ ।
युवाहरु काम कम कुरा धेरै गर्छन् भन्छन् नि?
हैन । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन सक्नुपर्दछ । युवाहरुमा जुन जोश, जाँगर र क्षमता हुन्छ, त्यसलाई समयमै बुझेर थोरै Support / Guidence गर्ने हो भने आजका शिक्षित युवा देशभित्रै बसेर केही गर्न सक्छन् । आजका युवाहरुलाई केही गर्ने Plateform को जरुरी छ ।
निजी शिक्षण संस्थाहरु सेवामुखीभन्दा नाफामुखी देखिन्छन् किन ?
राज्यको शिक्षा नीतिले त्यस्तो देखाएको भए पनि निजीस्तरमा सञ्चालन भएका शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्नु नाफाका लागि मात्र नभई सेवाकै उद्देश्यले अघि बढेका हुन्छन् । यदि सेवामुखी भएन भने विद्यालयहरुमा जनमासको आकर्षण घटेर जान्छ ।
मानव र मानव समुदायको आवश्यकतामा आधारित भएर कुनैपनि विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्दछ । तथापि केही शुल्क लिनु हाम्रो बाध्यता हो । हैन भने राज्यले Subsidryदिनु प¥यो । जुन असम्भव देखिन्छ ।
संविधानतः कक्षा ८ सम्म अनिवार्य र निःशुल्क माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क व्यवस्था गरिए पनि यो वा त्यो नाममा सरकारी विद्यालयमा अभिभावकहरुसँग शुल्क उठाउने पनि त गरेको पाईन्छ । उनीहरुलाई के भन्ने त ? शिक्षामा दोहोरो चरित्रलाई नीति निर्माताले व्यवस्थित गर्न नसक्दा यो विद्यमान छ ।
दाङभ्याली अरुभन्दा किन फरक छ ?
समाज परिर्वतनमा हामी तत्पर रहेका छौँ । हामी निरन्तरता र परिवर्तनमा विश्वास गर्छौँ । दाङभ्याली वास्तवमै बालमैत्री वातावरणमा सञ्चालित हुनुका साथै अभिभावकमैत्री, शिक्षकमैत्री, वातावरणमैत्री राष्ट्रमैत्री हुँदै मानवमैत्री शिक्षाको माध्यम बन्न चाहन्छ ।
राज्यले तय गर्ने जस्तोेसुकै नीति नियममा रही आधुनिक शिक्षाको उज्यालोतर्फको यात्रामा आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीलाई अक्षरशः पालना गर्नु हाम्रो मुल उद्देश्य हो । यसका लागि सम्पूर्ण विवेक र लगानी खर्चिरहेका छौँ ।
सम्भव छ । तर शिक्षाको माध्यमबाट समाजमा आउने परिवर्तनको अनुभूति गर्नलाई एउटा पुस्ता नै पर्खनु पर्दछ । अबको यात्रा अभिभावकीय शिक्षामा पनि जोड दिनुपर्दछ । तोरी पेलेर तेल थापै झैँ शिक्षामा जादु कसैले पनि गर्न सक्दैन । Passion ,Continuity, Devotion जरुरी हुन्छ नै ।
आजका बालबालिकालाई सुसंस्कृत र शिक्षित बनाउन हामी सबै एकजुट हुन जरुरी छ । छोराछोरी तपाई हाम्रा भविष्य हुन् । आउनुस्, दाङ भ्यालीमा भर्ना गर्नुस् । एकपटक विद्यालयमा आएर बुझ्नुस् ।
हामी तपाईको चाहना र आवश्यकता बुझेर सेवासुविधा उपलव्ध गराउँदै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्षम छौँ भन्दै अन्त्यमा म र मेरो विद्यालयको बारेमा केही जानकारी पाठक तथा अभिभावकसम्म पु¥याउन मद्दत गर्ने प्रदेश टुडेप्रति आभार व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद !